Members of the Burmese community protest outside the Toronto Star office
Fear, loathing and lies in Rakhine state
This is racism, not Buddhism
Shedding light on Myanmar’s sectarian strife
ABSDF အေဘီ မြောက်ပိုင်း
ABSDF အေဘီ တောင်ပိုင်း
ကိုအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ကြောင်တွေကိုခွဲစိတ်ပြီးဘက်ထရီ၊အန်တီနာ၊မိုက်ကရိုဖုန်းတွေထည့်ပြီးနားထောင်လိုရတဲ့ပရိုဂရမ်တခုအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ Acoustic Kitty လို့ခေါ်ပါတယ်။
၁၉၅၀လောက်တုန်းကသမ္မတထရူးမင်းကတရုတ်ပြည်ကိုစီးဖို့အတွက်စီအိုင်အေကိုစေလွှတ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ရွှေတြိဂံနယ်မြေမှာစီအိုင်အေတွေကျက်စားဖူးပါတယ်။မြန်မာကသိပြီးစီအိုင်အေထောက်ပံ့ထားတဲ့ ကူမင်တန် တပ်ဖွဲတွေကိုမောင်းထုတ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ရှမ်းပြည်မှာဘိန်းအကြီးအကျယ်စိုက်ပျိုးမှူတွေဟာအဲဒီတုန်းကကူမင်တန်အဖွဲ့တွေကိုထောက်ပံရာမှာတစိတ်တပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းရဲ့ခေတ်မှာ MI ဆိုပြီး အားလုံးကြောက်ရတဲ့ MI တင်ဦး ဟာဆိုရင်လည်း ဦးနေဝင်းရဲ့ ခိုင်းစေမှုကြောင့် ဆိုင်ပန်ကျွန်းမှာ စီအိုင်အေရဲ့ သင်တန်းပေးတာကို ခံယူခဲ့ရသူတဦးပါ။ အဲဒီခေတ်က ထောက်လှမ်းရေး အရာရှိတွေက အမေရိကန်မှာ ထောက်လှမ်းရေး မွမ်းမံသင်တန်းတွေလည်း တက်ခွင့်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရာထူးကို တော်တော်ကြာကြာ ထမ်းဆောင်သွားခဲ့တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသူရကျော်ထင် ကလည်း အမေရိကန် စစ်တက္ကသိုလ်မှာ တနှစ်သွားပြီး ပညာသင်ယူခဲ့ဖူးပါတယ်။
Posted by Myo Lwin Aung at 7:02 AM
ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ် နောက်ဆုံးနှစ်ကျောင်းသား ကိုအောင်မွန်
Rakhine Commission Report‏
ရွှေတိဂုံစေတည်တော်မြတ်ကြီးအား ဝေဟင်အပေါ်တည့်တည့်မှ ရိုက်ယူထား သော ရှားပါးဓာတ်ပုံ
မဖဲ့ မစောင်း၊ ကိုယ့်လမ်းကြောင်းကို၊
( ရွှေကျင်သာသနာပိုင် ရွေဟင်္သာ ဆရာတော် )
လူ ကို လူလိုသိကြပါ။
ပြည့် အသဲ၊ နှလုံး
အိုးဝေကျေးဇူး။ ဒေါင်းပျိုထိုးဆွတ် ဘယ်ညာခွပ်၍ လွတ်လပ်ရပေ တို့တတွေသည် အိုးဝေကျေးဇူးပါတကား။ မင်းသုဝဏ်။
"မေတ္တာမဖက် သစ္စာပျက်က စစ်မက်လည်းပွါး ပြည်ချောက်ခြား၍ တိုင်းကားမသာ ပြည်ကြီးနာလိမ့်" မန်လည်ဆရာတော်ရဲ့ မာဃဒေဝ လင်္ကာလေးပါ။
ထလော့ ဒို့အမျိုးသားအပေါင်းတို့ 
ပြည်သူ့ ဆန္ဒ သဘောထား
လျှပ်စစ်မီး ရရှိရေးအတွက် ဖယောင်းတိုင် ထွန်းညှိ ဆန္ဒပြမှုအား အပြည့်အ၀ ထောက်ခံအပ်ပါသည်။
ငါတို့ ရဲ့ အလံတော်
The watch tower or the Nann Myint Myawsin
တင်ပြီးတဲ့ စာမျက်နာများ (post)
အစိုးရ နှင့် ပြည်ပနိုင်ငံများ စစ်တပ်ချင်း ဆက်ဆံမှု ...
ပရဟိတ ကာ/ချုပ့်ကြီး ဦးကျော်သူထံ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ
ရှေ့ဟောင်း အမွေအနှစ် လယ်တီသိမ်တော်ကြီး ဖျက်ဆီးခံရ
အတိုက်အခံများကို ကူညီရန် ဂျပန်အစိုးရကို ၀န်ကြီးချု...
ဗိုလ်ကြီးဟောင်း နေမျိုးဇင်နှင့် လယ်သမားအရေး တက်ကြွ...
ရခိုင်တပ်မတော်တွင် ကမန်လူမျိုး အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များက...
လက်ပံတောင်းတောင် စီမံကိန်းရှိ လယ်တီသိမ်ကို အပြီးဖြ...
အဝေးပြေးခရီးသည် အထူးခရီးသွားအာမခံ မဖြစ်မနေ ဝယ်ရမည်...
လူသေနှုန်းမြင့် အမြန်လမ်း နိုင်ငံတကာအကူအညီ အလွဲမသုံ...
မိုးမိတ်မြို့နယ်တွင် တရားမဝင်သစ်ခိုးထုတ်မှုများ ယနေ...
မြိတ် ကျောက်မီးသွေးစက် ရုံ တည်ဆောက် =-=-=-=-=-=-=-...
** စစ်တပ်ရဲ့ မလိမ္မာတစ်ခါမိုက်တဲ့ အရာရှိများ**
အရပ်သားသံအမတ်ကြီးဆိုတာ မရှိတဲ့ ကျွန်တော်တို.တိုင်း...
တရားဝင်တင်ပို့ခွင့် မပြုသောကြောင့် တံဆိပ်မပါသည့် အ...
မိုးဦး၊ လေဦးကာလ သတိပေးနှိုးဆော်
မွေးရာပါ ဗိုက်ဖေါင်းနေသည့်ကလေးငယ်၊ ဆေးကုသရေး အခက်ြ...
ပုလောမြို့ နယ်တွင် ပုဒ်မ 2008 ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပေ...
အမေရိကန်ရေတပ် စစ်စခန်းကို ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်ဖို့ MH...
ဆော်ဒီအာရေဗျတွင် MERS ရောဂါကြောင့် သေဆုံးသူ (၁၀၀)ဥ...
တိုက်ပွဲတွေနဲ့ ပြန်လည် ဝေ၀ါးလာတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး
ဦးချန်ထွန်း သို့မဟုတ် ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဆူးလေးစေတီေ...
အိုဘားမားနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ မြန်မာလူငယ်တွေ ဘာတွေေ...
ကျောက်ဖြူ ရေနက်ဆိပ်ကမ်းနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံ၏ အကျိုးစီး...
ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် အထိမ်းအမှတ် ကျောက်စာထားရှိဖို့ ...
ကျေးဇူးရှင်တွေ ပေါတယ် များတယ် ဆပ်လို့ရယ် ကုန်နိုင်...
Heat stroke အပူဒဏ် ဘယ်လိုခံမလဲ
ဦးဝင်းတင်လွန် NLD ဘာလဲ၊ ဘယ်လဲ
မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်များ၏ ကိန်းဂဏန်းများကပြောသော ရ...
လက်နက်ငယ်များနှင့်အတူ တမူးမြို့၌ တရုတ်နိုင်ငံသား ၈...
ဆရာတော် ဦးထွန်းရှိန်အတွက် ကျောင်းမြေအသစ် ဝယ်ယူရန်...
တော်ပါပြီ။ တန်ပါပြီ။ စစ်ဗိုလ်ဦးစီး စနစ်ကြီးတွေ တေ...
ပုလဲကွန်ဒို တည်ဆောက်ခဲ့သည့် Asia Express ကုမ္ပဏီမှ ...
သန်းရွှေမှာ ဘယ်လို အရည်အချင်းမျိုးတွေ ရှိလို့လဲ ၊
မလေးမှာ သမ္မတ အိုဘားမားနဲ့ တွေ့ဆုံရေး မြန်မာလူငယ် ဆ...
ကချင်ပြည်နယ် စစ်ဘေးရှောင် ဒုက္ခသည်များအား တရုတ်လက်မ...
ယုံကြည်ချက် ချိုးဖြူ ငှက်များ
မန္တလေးတွင် နေ့အပူချိန်မြင့်တက်၍ တစ်ရက်အတွင်း ခြောက...
မြန်မာ ပင်လယ်ပြင် ၏ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ကို ဖျက်ဆီးနေ...
''ကိုစိန်ဝင်း မရေးဖြစ်တဲ့ ဆောင်းပါး''
အ မေ စု ရဲ့ ဆို့ နင့် စာ တမ်း
အဖြစ်ဆိုးအလွန် ခရီးသည်တင်ယာဉ်လိုင်းအချို့ အပြောင်း...
DVB -21-03-2014 ဦးဝင်းတင် ရုပ်သံမှတ်တမ်းအပိုင်း(၂...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် သဘာပတိအဖွဲ့ဝင် ဦးဝင...
DVB -07-04-2014 ဦးဝင်းတင် ရုပ်သံမှတ်တမ်းအပိုင်း(၁...
‘‘၈၈မျိုးဆက်ဟာ ဂျော့ဆိုးရော့စ်ရဲ့ Open Society ကနေ...
ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်နာယကသူရဦးရွှေမန်းနှင့် တွေ့ဆုံ...
Tin Aye’s Plan to Cheat the Game
Suu Kyi Questions Myanmar Government’s Commitment ...
စစ်တွေထောင်ထဲတွင် ကွယ်လွန်သွားခဲ့သူ ဦးမောင်သိန်းအ...
“စစ်ကိုင်းတောင် / ကိုအံ့ကြီး”
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြားသော Burma / Myanmar အြေ...
NLD နဲ့ တပ်မတော်ကြား ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ရေး အမြင်ချင်း...
မိုင် ၁၆၀၀ လမ်းလျှောက် အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် တရားစွဲ ခံ...
ကိုအောင်ထွန်း (ခ)နေဒွန်း နာ ရေးသတင်း
ဤခရီး နီးဖို့ ဆိုလျှင်
UNA နှင့် NCCT တို့ ရန်ကုန်တွင် တွေ့ဆုံ
ဦးကိုကိုကြီး ၏ မင်္ဂလာဆောင် အမြတ်ငွေ ၁၇၃၈ သိန်းကျော...
အိုဘားမား၏ ဒုတိယမြောက် မြန်မာခရီးစဉ်၌ ထိပ်ပိုင်းခေ...
ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဌ တင်အေးဆိုတာ ဘယ်သူလဲ
ပျောက်ဆုံးမလေးရှားလေယာဉ် ရှာတွေ့ဖို့ အလားအလာကောင်း...
၂၀၁၅ မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ နိုင်ငံအနှံ့ မဲဆွယ်...
မင်္ဂလာပွဲလက်ဖွဲ့လား လာဘ်လာဘလားဆိုတာ ခွဲခြားဖို့ ဥပေ...
အာဏာမသိမ်းလို၍ လွှတ်တော်တွင် တပ်မတော်ပါဝင်ဟု ရွေးကေ...
အာဏာရှင်ကင်ဂျုံအန်း ပြည်သူ့ လုံခြုံရေးဝန်ကြီး အိုဆ...
► 2012 (6657)
► November (648)
မင်္ဂလာနှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေလို့ နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ် Happy New Year , to all my friends! Aung Moe
"သမုဒ္ဒရာရေသည် မည်မျှပင် များပြားသော်လည်း သောက်ချိုးသုံးစွဲရန် အကျိုးမပြုသကဲ့သို့ လူမိုက် / သူယုတ်မာတို့၏ စည်းစိမ်ဥစ္စာသည်လည်း လောကနှင့် သတ္တ၀ါတို့အတွက် အကျိုးကျေးဇူး အားကိုးဖွယ် မဖြစ်။ တွင်းရေသည် များပြားလွန်းလှသည် မဟုတ်သော်လည်း သောက်ချိုးသုံးစွဲ အမှီသဟဲ ပြု၍ ရသကဲ့သို့ ပညာရှိ / သူတော်ကောင်းတို့၏ စည်းစိမ်ဥစ္စာသည်လည်း လောကနှင့် သတ္တ၀ါတို့အတွက် အကျိုးကျေးဇူး အားကိုးဖွယ် ဖြစ်လေသည်"
My Friends / မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများ
United we win !!!
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ..Please visit again.
In pictures: Joy in Rangoon
Burma's evolving opposition
Aung San Suu Kyi: Fading light?
Burma election: Q&A
NLD's Charity Music Concert for Assisting Education | Myanmar ...
Audio in Myanmar - Dhamma Download
► Faces Magazine
► Idea Magazine
► Links of myanmar websites
► Maya Online Magazine
► Myanmar People Magazine
► MyanmarTimes Journal
► Perfect Magazine
► To buy Myanmar Books
► Yati Magazine
Burma VJ Media Network
ရိုးမ ၃ သတင်းစဉ်
၈၈၈၈ ပြည်သူ့ နေ့ စဉ်
မြစ်မခ မီဒီယာအဖွဲ့ – Myit Ma Kha Media Group
မြန်မာ့ ဟစ်တိုင် ( ကနေဒါ )
ပိုင်သုန် ( ဘော်လုံး ကလပ် )
ကနေဒါ မြန်မာ နက်ဝပ်
သစ်ထူးလွင် Myanmar News
ဆန်း၏ သမာဓိ၊ ဆန်း၏ ပညာ
ကြုံရာဘ၀၊ မုတလုံလောက်၊ ခံမြို.ဆောက်၏
ရိုးကျင့် မြင့်ကြံ၊ သူ.အလံတည့်
ပြောလိုက်ပါဘိ ဟောပါဘိ။ ။
လမ်းစဉ်သတင်း၊ အတွဲ ၂၊ အမှတ် ၁၄ (၁၅၊ ၇၊ ၁၉၆၆)
This is Buddhist Land
ဒုက္ခသည် ပြန်လည်လက်ခံရေးအစီအစဉ် ကြန့်ကြာမှု ဘင်္ဂလားကို မြန်မာအပြစ်ဖို့
မိုးမခ မီဒီယာ - MoeMaKa News & Media
ကာတွန်း ရာဇာသာစည်ရဲ့ တစစ် စစ်နဲ့
ရန်-ငါ စည်းမရှိတော့ပေမယ့် Moral စည်းလေးတော့ ရှိစေချင်
ဥပုန်းလေး ချက်စားကြရအောင့့့်
အရူး နဲ့ သူခိုး
အမိမြေသို့ကျေးဇူးဆပ်ခြင်း
Freedom For Burma
Khant Si Thu , Ei Chaw Po Part1
Myanmar Happy New Year Present
Fight for Freedom Burma
ဂျပန်ကူမှ နလန်ထူရ ပုဂံမြေအလှ
Naw Phn Hla - Hunger Strike - 29th August 2013
Burmese Buddhist Society,BC
Cindy Winn's Family
မြန်မာဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက် Myanmar Democracy Congress
ABSDF (Australia Branch)
၂၄ ကြိမ်မြောက် (၈) လေးလုံး နှစ်ပတ်လည်နေ့အတွက် ဒေါက်တာမြင့်ချို ပြောခဲ့သော မိန့်ခွန်း
Burma Strange News
နိုင်ငံတော်သမ္မတအား ဘကြီးစိန်ဘွဲ့ အပ်နှင်း ဂုဏ်ပြု
Alumni of University of Nursing, Yangon
အတာရေ အေးအေး လောင်းရအောင်....ရေ ရ မယ်။။။ ရေ............
YouTube Channels Beta
Date set for moving all remaining old channels to new version
အမှတ်တရ မှတ်စု မှတ်တမ်း များ
သာမည ဆရာတော် ဘုရားကြီး။
MOETHIHAAUNG: Hunger Strike to End Crimes in Burma:
MOETHIHAAUNG: Canada's NDP leader Jack Laytom speech at ...
Canada's NDP leader Jack Laytom speech at free Burma Icon Aung Sun Suu .
MOETHIHAAUNG: ပြည်သူ့ဘက်က အပြတ်လိုက်မယ်၊ တပ်မတော် ကြားနေပါ
MOETHIHAAUNG: Canada ( Nov 6, 2010)
MOETHIHAAUNG: 08 August 2010 - Part 1 of 4
MOETHIHAAUNG: canada toronto free Burma Icon Aung Sun Suu Kyi Against SPDC (www.yeyint...
MOETHIHAAUNG: G 20, in Toronto
MOETHIHAAUNG: The Freedom Vigil on Jun 17, 2010, in Toronto, Ontario, Canada
MOETHIHAAUNG: Happy Birthday!
MOETHIHAAUNG: Toronto Burmese New year
MOETHIHAAUNG: အမေနဲ့ ကျွန်တော်
MOETHIHAAUNG: 38 Min Ga Lar
တရားမ၀င်ပြည့် တန်ဆာ အိမ်များ ရပ်ကွက်နေ အမျိုးကောင်း သမီးများ အခက်ကြုံ
ပြည်ကြီးတံခွန် မြို့နယ် အတွင်း (ဘ-၃)လူနေ ရပ်ကွက်ရှိ ပြည့်တန်ဆာ လုပ်ငန်း လုပ်သည် အဆောက် အဦးပုံ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၊ ပြည်ကြီးတ...
ရွှေမလေးတွေ ပြည့်တန်ဆာလုပ် နေတဲ့အိမ်များ (အထူးဆောင်းပါး)
Myanmar Online News Sunday, 23 December 2012 “သမီးကို မိဘတွေက ကျောင်းဆက်မထားနိုင်တော့တဲ့ အဖြစ်ဆိုတော့ လူပွဲစားကလည်း ရပ်ကွက်ထဲမှာ ထ...
ဦးခေါင်းပြတ် အမျိုးသမီးအမှု သံသယရှိသူတစ်ဦးကို စတင်စစ်ဆေးနေ
Wednesday, February 20, 2013 ဖြူးမြို့နယ်အတွင်း ဦးခေါင်းပြတ်ကာ သေဆုံးနေသော အမျိုးသမီး အလောင်းမှုခင်းကိစ္စရပ်နှင့် ဆက်နွှယ် နေသည်ဟု သံ...
သီလကို အစစ်ဆေးခံဖို့ စိန်ခေါ်ရဲ သူ
ကာတွန်း- ပီမျိုးဟိတ် အစစ်ဆေးခံရဲတဲ့ သတ္တိရှင် ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဦးနုနဲ့ပတ်သက်သက်လို့ သီလ အစစ်ဆေးခံနိုင်သူတဦးအဖြစ် ကာတွန်းကွက်ပါ။ တြ...
မျောက်သစ်ကိုင်းလွတ်နေတဲ့ ချဉ်ဖတ်ဇော်ဇော် - မယ်လိုဒီ နဲ့ ဒီလိုဒီလို
Browse › Home › ဓါတ်ပုံ » မျောက်သစ်ကိုင်းလွတ်နေတဲ့ ချဉ်ဖတ်ဇော်ဇော် - မယ်လိုဒီ နဲ့ ဒီလိုဒီလို မျောက်သစ်ကိုင်းလွတ်နေတဲ့ ချဉ်ဖတ်ဇော်ဇေ...
ဒါရိုက်တာ ချို တူး ဇော်ရဲ့လက်ရာ
နယူးယောက်မြို့က ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ ခင်ဗျား လာမယ့် ဆဲဗင်းဇူလိုင်မှာ နယူးယောက်ခ် မှာ “လွမ်းစိမ့်” ပြပါမယ်။ Art@apt က စီစဉ်တင...
စစ်ခုံရုံးသို့ အယူခံ ဝင်ခွင့် မရသော တပ်မတော်သား ဖခင် ၏ ဆန္ဒ ဖော်ထုတ်ခွင့် ထပ်မံ ပယ်ချခံရ
The Voice Weekly စစ်ခုံရုံးသို့ အယူခံ ဝင်ခွင့် မရသော တပ်မတော်သား ဖခင် ၏ ဆန္ဒ ဖော်ထုတ်ခွင့် ထပ်မံ ပယ်ချခံရ .............................
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်ကို တ၀က်စီ ခွဲယူဖို့ တရားရုံး က အမိန့် ချမှတ်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်ကို ဦးအောင်ဆန်းဦး နှင့် တ၀က်စီ ခွဲယူဖို့ ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းခရိုင် တရားရုံး က အမိန့် ချမှတ် လိုက်ကြောင်း Favo...
အပျို၊ အပျိုစစ် နှင့် အပျိုစင်
အပျို၊အပျိုစစ်နှင့် အပျိုစင်.......(ရွှေမြန်မာဥယျာဉ် ဆိုဒ်ထဲ မှကူးယူ တင်ပြပါတယ် ) by နန္ဒ စာရီ on Sunday, December 4, 2011 at 5:10am အပျို၊အပ...
ဦးပိုင် ရဲ့လိင် အရှုပ်တော် ပုံ
by FNG on November 25, 2012 26 30 မဲပေးပါ စက်ရုံ၊လုပ်ငန်းများ ပျက်စီးဆုံးရှုံးစေရန...
ဒေါင်းကိတ်တဲ့ တယောက်တဖဲ့စားရအောင် ယောင်လို့ တော့မလုနဲ့ပြည်သူပိုင်ကွဲ့ ...။
Planet : Dictionary
မင်း တည့်တည့်လှမ်း ငါ တည့်တည့်လှမ်း
အုန်းလက်ကြွေ သူ့နံဘေး၊ ဆောင့်ခဲ့ရသေး။
နောက်တစ်ချီ ဒီတစ်လုံးက၊ ဖုံးလိုက်ပြန်ပါ။
မြုပ်လေပေါ့ ပေါ်မလာ၊ မဗေဒါအလှ။
တစ်လံကွာ လှိုင်းအကြွ၊ ပေါ်လိုက်ပြန်ရ။
ဘဲအုပ်မှာ တစ်ရာ နှစ်ရာ။
ဗေဒါပျံ အံကိုခဲ၊ ပန်းပန်လျှက်ပဲ။
နိုင်ယာဂရာဖေါသို့အဘိဓမ္မာရွှေည၀ါဆရာတော်အားလိုက်ပို့ ကြစဉ်....
Shwe Nya Wa Sayadaw met overseas Myanmars and gave speeches at Mahadhammika Burmese Buddhist Temple
ရခိုင်ပြည်နယ်အရေး ၀ိုင်းဝန်းကူညီကြပါ စို့ ။
Toronto, Rogers TV Talk Show
BURMA AWARENESS NIGHT at Brock University
ဒညတ၊ PDF၊ DYF နှင့် ABSDF တို့ တွင် တာဝန်ထမ်းခဲ့စဉ် ( ၁၉၈၈ - ၁၉၉၅)
ကျေးလက်က ဆေးမှူး ဘဝ
၂၀၂ (အောင်ဇေယျ စခန်း) အမှတ်တရ
နှိင်နှိင်, အောင်မိုး,----, ကိုကျော်ရ, တင်မိုးထွန်း, ဇော်ဇော် and ဝဏ္စကျော်စိုး.
လွင်ဦး (လူမဲ) , ကိုကျော်ရ ( စာ ရေးနေသူ) စိုးမြင့်လေး. နှင့် အောင်မိုး (ကနေဒါ)
Washington DC at the White House
အဲဒီတုံးကကူညီခဲ့ကြသူများကို ဒီနေရာမှ မှတ်တမ်းတင် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဖော့ဝေး မြို့ကျောင်းသားညီလာခံ စတုထ္တ အကြိမ်
Fort Wayne conference
နောက်တစ်ခေါက် ထပ်လာခဲ့ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..... Simple theme. Powered by Blogger.